Gbasara anyị - Kingtai Craft Products Co., Ltd.
Kingtai craft ngwaahịa mmachi ụlọ ọrụ, na china ama metal craft emeputa, nke nwere ihe karịrị afọ 20 dị iche iche crafts mmepụta ahụmahụ, ya kpam kpam mwekota nke ụlọ ọrụ na ahia ụlọ ọrụ, si otú anyị nwere ma tozuru okè imewe otu na azụmahịa otu.
Kemgbe ọ malitere, ikikere na patenti anyị nwetara karịa 30, ọtụtụ n'ime ha bụ Disney, Wal-Mart, Harry ọkpụite, Universal Studio, SGS, FDA na ISO9001.
Anyị na-enye mma pop omenala ngwaahịa, gụnyere keychains, nrite, pin baajị, nju, ji atụ ngaji na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịgbanwe nke azụmahịa gị mkpa na-eme ka ngwaahịa dị ka gị e mere foto, omenala ụdị, na zuru ezu chọrọ.
N'ime afọ iri, anyị abụrụla ndị na-ebubata ngwaahịa na Disney, Wal-Mart, Harry Potter na Universal 'Studios, Anyị na-ere ngwaahịa anyị ozugbo na ụlọ ahịa ma na-erekwa ahịa gburugburu ụwa, nnukwu oke anyị anaghị adajụ igbo mkpa ndị ahịa anyị yana a na-emelite mgbe niile iji tinye Ọganihu Ọhụrụ na ụlọ ọrụ ngwaahịa nkwado.
KingTai nke oge a na - arụ ọrụ nwere ebumnuche ndị ahịa, ma sorokwa na ngosipụta Canton Fair na Hong Kong gosipụtara ọtụtụ afọ. Anyị na-enye ezi ọrụ maka ndị ahịa, ma na-enwe ọhụụ na okwukwe nke ọmarịcha ihe okike
Ya mere, gịnị ma anyị anwale anyị? Obi siri anyị ike na anyị ga-enwe ike izute ma gafere atụmanya gị niile.
Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike iji akara njirimara gị mee?
Anyị na-enye ọtụtụ ụdị dị iche iche dị elu nke enamel lapel na ntaneti na ntanetị na-agbanwe ngwa ngwa. Chepụta onwe gị enamel pin na logos ma ọ bụ gaa ọdịnala na ọtụtụ afọ nke ọrụ. Na anyị Pantone agba kenha ngwá ọrụ, anyị hụ na gị imewe-abịa na-na kpọmkwem na agba gị hụrụ.
Enwere ike inye ndị ọrụ ọrụ Enamel iji gosipụta mmata ma ọ bụ ndị ọrụ afọ ofufo iji gosipụta ekele gị. Ngwaahịa anyị na-adịgide adịgide nke nwere ogo-dị ka mma, zuru oke inye dị ka onyinye ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị mara. Gosi ntaneti USA gị na atụkọ ọkọlọtọ America anyị. Chọrọ ịgbasa mmata? Anyị na-enye ezigbo anwụrụ mara Awaji Ribbon, nke enwere ike ịhazi ya na ozi gị pụrụ iche.
Na imewe gị, ị nwere ike nweta ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ dị elu na usoro gị. Site na keychains, amara, na kọflịnks na ọla ntị, mkpado nkịta, eriri agbụ, na medallions, anyị nwere azịza maka nkwado gị niile ma ọ bụ onyinye achọrọ.
Omenala atụdo bụ oké ọnụ na mfe iji chepụta. Ha bụ ụzọ dị mma iji kwụghachi ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo na ụmụ akwụkwọ ụgwọ, gosi ụlọ ọrụ gị ihe ngosi, nwee obi ụtọ na otu egwuregwu gị, kwalite klọb gị, na ịsọpụrụ ndị agha lagoro ezumike nka! Anyị ọkọlọtọ atụdo na-nganga mere na CHINA Chọgharịa anyị veranda foto na-sitere n'ike mmụọ nsọ maka gị ọzọ e kere eke.